Izimboni Zezimboni | I-Polypropylene ne-polyester | I-Narrowtex
INarrowtex ingumkhiqizi oyinhloko wezinhlobonhlobo eziningi zewebhu zezimboni ezisezingeni eliphakeme, ngemibala ehlukahlukene, ububanzi, ukwakheka, izinto zokwakha kanye nemiklamo eyinkimbinkimbi. Okuhlangenwe nakho kwethu okuhlukahlukene emkhakheni wokuklama nokukhiqiza kusisize ukuthi sikwazi ukunikela ngemiklamo emikhulu nehlukile. Ngenxa yokwehlukahluka okukhulu kwamaphethini nemibala etholakalayo, ama-webbings aklanywe ngokwezifiso e-Narrowtex akhethekile kuzidingo zamakhasimende, aziwa kakhulu futhi akhiqizwa ngezikhathi zesikhathi esifushane sokuhola. I-Narrowtex ingumhlinzeki ohamba phambili we-webbing, futhi inikeza ububanzi obujwayelekile obujwayelekile bama-webbings, atholakala esitokisini.
I-Webbing esetshenziswa ezimbonini ezahlukahlukene
Imboni yezilwane ezifuywayo - amakhola wezilwane nama-leashes
Imfashini - izicathulo, amabhande ebhulukwe, amabhande okhalweni, ama-suspenders.
Izinsiza zemidlalo - izikhwama zemidlalo, amasaka erakhi, izikhwama zezicathulo
Impahla - izikhwama ezikhululekile, amaphakethe angemuva, izikhwama ze-duffel, izikhwama zasemini, izikhwama zekhompyutha, izikhwama
I-Equestrian - i-saddlery
Okwezempi - amabhande ezembatho, amaloli, okokulala namabhande egobolondo
Ngaphandle - amatende, ama-awnings, i-canvas
Ukunakekelwa Kwezempilo - ukuhlinzwa, ukulungisa imichilo namabhinca esihlakaleni.
Izithuthi - imichilo esembozweni, imichilo yamasondo ayizipele.
Ipharashute - amahhanisi okuphepha,
Ukuboshwa Kwezimboni Okwenziwe Ngokwezifiso
I-Webbing ingahle yenzelwe iqembu le-Narrowtex design, ngombala, iphethini, okokusebenza kanye nobubanzi ukukhuthaza ukuqwashiswa komkhiqizo wenkampani.
Imikhiqizo ye-Narrowtex Webbing
INarrowtex ikhiqiza izinhlobonhlobo zamatshe ewebhu e-weebble weave, aqanjwa ngokusebenzisa imicu ephezulu ye-polypropylene. I-pebble weave webbing iyatholakala ngemiklamo ehlukahlukene, imibala nobukhulu. I-polypropylene webbing iyindwangu eboshwe eduze eyenziwe ngemicu eqinile ngakho-ke inezinhlobonhlobo zezicelo. Imibala ejwayelekile nobubanzi buyatholakala kusitoko. Izidingo ezikhethekile zingenziwa ngezifiso
I-Plain Weave Webbing
INarrowtex ingumkhiqizi oyinhloko wenayiloni yesisindo esilula kanye ne-polypropylene webbing. INarrowtex inikeza umugqa wesisindo esincane senayiloni efaka imibala egqamile yokuluka, etholakalayo ukulethwa ngokushesha. Izinsimbi ezilukiwe ezifekethisiwe zenziwa kusetshenziswa imicu eqinile futhi eqinile ukuhlinzekela ngezintambo ezisezingeni eliphakeme nokusebenza.
Abahlinzeki be-Webbing Designer
I-Narrowtex ingumhlinzeki ophambili nomkhiqizi wewebhu yomklami. Ukunikeza uhla olukhethekile lobubanzi obuhlukahlukene, imibala, ukwakheka namaphethini, iNarrowtex ithuthukise ubuchwepheshe obukhethekile emkhakheni wewebhu yomklami. Ihlanganiswe nobuchwepheshe bezobuchwepheshe kanye nemishini ethuthukile kwezobuchwepheshe, noma iyiphi indwangu emincane yokwakheka okuhlukile kungenzeka kalula yiqembu leNarrowtex. Iphethini ngayinye ye-webbing yakhelwe ngawodwana ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende, inika amandla amathuba wokukhangisa nokwazisa ngomkhiqizo.
UJacquard webbing, ungomunye umugqa wama-webbings akhiqizwe yi-Narrowtex, enikeza uhla olukhethekile olwenziwe ngenhlanganisela ye-warp & weft ehlukahlukene ngemibala ehlukahlukene kusetshenziswa imiklamo emihle ye-jacquard. Kutholakala ngobuningi bemiklamo, amaphethini nemibala, la ma-webbings we-jacquard, ahlangabezana nezidingo zezindawo ezinokusebenza okuphezulu futhi aklanywe ngokukhethekile futhi akhelwe ukuqina okuphezulu, isikhalazo sezimonyo nokwazisa ngomaki.
Ubuningi besikhwama se-web
INarrowtex ibuye ikhiqize i-webbing ngqo ukuze isetshenziswe ezikhwameni eziningi. Ukuluka, okwenziwe ngentambo ye-polypropylene, kuthungwa emakhoneni amane esikhwama esiningi ukusiza ukugcwaliswa nokuphakanyiswa kwesikhwama. I-Narrowtex bulk bag webbing yenzelwe ikakhulukazi ukuxhasa inqubo yokuphakamisa nokugcwalisa izikhwama.
Amateyipu Wokubopha we-Polyester
INarrowtex ikhiqiza amateyipu alukiwe kusetshenziswa imicu yokusebenza ephezulu njenge-polyester. Idizayinelwe okuyisicaba futhi okuyishubhu, lawa ma-webbings aphakeme ngokwamandla nesisindo esincane, ngaleyo ndlela asetshenziswa ezinhlelweni ezahlukahlukene. Ngenxa yekhwalithi ephezulu nokuqina, amateyipu e-polyester angafakwa umbala noma angenziwa futhi ngezifiso ngezidingo ezithile.
Izinzuzo zeNarrowtex Webbing
Iphethini nokuklama kokuzikhethela
Ibanga elikhulu lombala
Ububanzi obuhlukahlukene nobukhulu
Esikhungweni sokuhlola izindlu
Imikhiqizo eqinisekisiwe futhi evunyelwe
Ibanga elijwayelekile kusukela kusitoko